ကလေးရောဂါများကို ပေါင်းစည်းကုသမှုပေးခြင်း - ဝီကီပီးဒီးယား
ကလေးရောဂါများကို ပေါင်းစည်းကုသမှုပေးခြင်း (အင်္ဂလိပ်: Integrated Management of Childhood Illness; အတိုကောက် IMCI) သည် ကလေးကျန်းမာရေးအတွက် ရောဂါများကို ဘက်ပေါင်းစုံမှ စနစ်တကျ ပေါင်းစည်းကုသသော နည်းလမ်း ဖြစ်သည်။ ကုသမှုသာမကာ ရောဂါကာကွယ်ခြင်းကိုပါ ဦးတည်သော နည်းလမ်းဖြစ်သည်။ ဤနည်းလမ်းကို ကုလသမဂ္ဂ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့နှင့် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့တို့မှ ၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင် စတင်အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။
၁ ကလေးသူငယ် ကျန်းမာရေး မညီမျှခြင်းများ
ကလေးသူငယ် ကျန်းမာရေး မညီမျှခြင်းများ[ပြင်ဆင်ရန်]
၁၉၇၀ ဆယ်စုနှစ်မှ စတင်၍ နှစ်စဉ် အသက်ငါးနှစ်အောက်ကလေး သေဆုံးမှုနှုန်းသည် သုံးပုံတစ်ပုံခန့် ကျဆင်းလာခဲ့သော်လည်း ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး အနေဖြင့် ကျဆင်းလာခဲ့ခြင်း မဟုတ်ပေ။ ၁၉၉၉ ခုနှစ် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေး အစီရင်ခံစာအရ ဝင်ငွေ အလယ်အလတ်မှ အနိမ့်ဆုံးဖြစ်သော နိုင်ငံများတွင် ကလေးငယ်များသည် စက်မှုထွန်းကားသော နိုင်ငံများရှိ ကလေးများထက် အသက် ၅ နှစ် မရောက်မီတွင် သေနှုန်းနိုင်ခြေမှာ ၁၀ ဆ ဖြစ်နေသည်။ ၁၉၉၈ ခုနှစ်တွင် နိုင်ငံပေါင်း ၅၀ ကျော်တွင် ကလေးငယ်သေဆုံးနှုန်းသည် အရှင်မွေး ၁၀၀၀ လျှင် သေဆုံးသူ ၁၀၀ ကျော်ရှိနေဆဲ ဖြစ်သည်။
နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း အဆိုပါနိုင်ငံများတွင် ကလေးငယ် ၁၀ သန်းခန့်သည် အသက်ငါးနှစ် မပြည့်မီတွင် သေဆုံးနေကြသည်။ သေဆုံးမှုများ၏ တစ်ဆယ်ပုံ ခုနစ်ပုံသည် ပြင်းထန်အသက်ရှုလမ်းကြောင်းကူးစက်ရောဂါများ (များသောအားဖြင့် အဆုတ်ရောင်ရောဂါ)၊ ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါ၊ ဝက်သက်ရောဂါ၊ ငှက်ဖျားရောဂါ၊ သို့မဟုတ် အာဟာရချို့တဲ့ခြင်းများနှင့် အဆိုပါရောဂါများ ပူးတွဲဖြစ်ပွားရခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်။
သိရှိကြပြီးသော ကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကုသခြင်း နည်းဗျူဟာများသည် ကလေးငယ်များ၏ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခြင်းအား ထင်ထင်ရှားရှား သိရှိကြပြီး ဖြစ်သည်။ ကလေးငယ်များတွင် ကာကွယ်ဆေးထိုးခြင်းကြောင့် ဝက်သက်ရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုများကို အောင်မြင်စွာ လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။ ခံတွင်းမှ ရေဓာတ်ဖြည့်ပေးခြင်း ကုထုံးသည်လည်း ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှောရောဂါကြောင့် သေဆုံးမှုကို လျှော့ချရာတွင် အဓိကပါဝင်ခဲ့သည်။ အကျိုးရှိသော ပဋိဇီဝဆေးများသည်လည်း နမိုးနီးယားအဆုတ်ရောင်ရောဂါရှိ ကလေးများ သန်းချီကို ကယ်ဆယ်နိုင်ခဲ့သည်။ ငှက်ဖျားရောဂါကို စောစီးစွာကုသမှုခံယူခြင်းသည် ကလေးများကို နလံထူစေနိုင်ပြီး ကျန်းမာသောဘဝကို ရရှိစေနိုင်ခဲ့သည်။ မိခင်နို့တိုက်ကျွေးခြင်းဖြင့် ကလေးငယ်များ သေဆုံးမှုကို လျှော့ချနိုင်ခဲ့သည်။
အဆိုပါဆောင်ရွက်ချက်များသည် အောင်မြင်မှုများ ရရှိခဲ့ပြီး၊ သက်သေသာဓကများ စုစည်းမှုများက နေမကောင်းသော ကလေးအား ပိုမိုကောင်းမွန်သော ရလဒ်များ ရရှိစေရန် ပေါင်းစည်းကုသမှုပေးခြင်းက သင့်လျော်ကြောင်း ဖော်ပြနေသည်။ ကလေးကျန်းမာရေးအစီအစဉ်များအနေဖြင့် ရောဂါတစ်ခုတည်းကို ဦးတည်သည်ထက် ကလေး၏ ဘက်စုံကျန်းမာရေးကို ပိုမိုအလေးထားသင့်သည်။ များစွာသော ကလေးများတွင် ရောဂါများ၏ ရောဂါလက္ခဏများ ထပ်တူဖြစ်ပေါ်နေခြင်းကြောင့် ရောဂါတစ်ခုအား အမည်တပ်ရာတွင် အခက်အခဲများ ရှိနေနိုင်သည်။ ဤအချက်ကို ရောဂါရှာဖွေသည့် ကိရိယာများနှင့် ဓာတ်ခွဲစမ်းသပ်နိုင်မှုများ နည်းပါးသော၊ သို့မဟုတ် လုံးဝမရှိသော ပထမအဆင့် ကျန်းမာရေးဌာနများတွင် အထူးသဖြင့် တွေ့ရှိရသည်။
ဤစိန်ခေါ်မှုကို တုံ့ပြန်သည့်အနေဖြင့် ၁၉၉၀ ဆယ်စုနှစ် အလယ်ပိုင်းတွင် ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့သည် ယူနီဆက်နှင့် အခြားသော အေဂျင်စီများ၊ အဖွဲ့အစည်းများ၊ လူပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ပူးပေါင်းကာ ကလေးရောဂါများကို ပေါင်းစည်းကုသမှုပေးခြင်း (Integrated Management of Childhood Illness - IMCI) ဟူသော နည်းဗျူဟာတစ်ခုကို ဖော်ဆောင်ခဲ့သည်။ ကုသမှုအတွက်ကို အဓိက ရည်ရွယ်ထားသော်လည်း IMCI နည်းဗျူဟာသည် အာဟာရ၊ ကာကွယ်ဆေးနှင့် အခြားသော ရောဂါကာကွယ်ခြင်းနှင့် ကျန်းမာရေးမြှင့်တင်ခြင်းတို့တွင် အရေးပါသည်များကိုလည်း ဦးတည်ခဲ့သည်။ နည်းဗျူဟာ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ သေဆုံးမှုများ လျော့ကျစေရန်၊ ရောဂါများနှင့် မသန်စွမ်းမှုများ ခံစားရမှုများကို နည်းပါးလျော့ကျစေရန်နှင့် ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးမှု ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန် အထောက်အကူဖြစ်စေရေးတို့ ဖြစ်သည်။
ယေဘုယျ ကလေးရောဂါများကြောင့် သေဆုံးမှုများတွင် အများဆုံးဖြစ်နေသော အသက်ငါးနှစ်အောက် ကလေးငယ်များအတွက် IMCI လမ်းညွှန်က ရည်ရွယ်သည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ WHO IMCI Fact Sheet။ World Health Organisation။
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/maternal/impac/en/ Archived 20 November 2018 at the Wayback Machine.
WHO (2014): Integrated Management of Childhood Illness (IMCI): set of distance learning modules (Download list Archived 22 April 2019 at the Wayback Machine.
WHO: Documents on the IMCI Archived 20 April 2019 at the Wayback Machine.
The World Health Organization (WHO) also published the " Integrated Management of Pregnancy and Childbirth (IMPAC)" which included newborn and neonatal care guidelines asacontinuum of care for both the mother and child in postnatal period. Archived 20 November 2018 at the Wayback Machine.
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ကလေးရောဂါများကို_ပေါင်းစည်းကုသမှုပေးခြင်း&oldid=687825" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၂၃ စက်တင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၁၁:၅၅ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။